Ko iyo iPhone X ichave nechidzitiro chakatsva seGoogle Pixel 2? | IPhone nhau
Ko iyo iPhone X ichave nechidzitiro chakatsva seGoogle Pixel 2?
Miguel Hernandez | | iPhone X, IPhone Zviteshi
Haisi nguva yekutanga kana kuzove wekupedzisira kuti paitaurwa nezve "zvitsva zvakapiswa" zvinowanzoitika muOLED kana Super AMOLED mapaneru. Iri dambudziko iro, kunyangwe kuve nekuita zvirinani uye zvirinani, richiri rakanonoka.
Muenzaniso wekupedzisira uye wakashata wakanyatsoita Google Pixel 2, iyo foni iyo mukufungidzira inofanira kunge iri muenzaniso kune mamwe ese madhiraivhu anofamba ne Android iri kuratidza kutadza uku uye vashandisi havana kufara zvakanyanya asi… Ko iyo iPhone X ichave nechidzitiro chakatsva seGoogle Pixel 2?
Zvakanaka, ngatitangei nekufunga nezvechinhu chakakoshesa, iyo skrini iyo iyo iPhone X inokwenenzverwa inogadzirwa neSamsung, mucherechedzo uyo kune akati wandei mazera wakavandudza zvakanyanya dambudziko iri, zvakati omei kuwana mune ayo mapaneru kunze nekufamba kwenguva. Muenzaniso ndewekuti hapana unit yeApple Watch iyo pani iri zvakare kubva kuSouth Korea femu yakaratidza matambudziko aya. Nekudaro, isu tinogona kutaura kuti Samsung panguva ino inofanirwa kuve dzidziso yekuvimbisa sosi kune vashandisi veIOS.
Kune rimwe divi, iyo Cupertino kambani pachayo yakatodonha pane inopfuura kamwe chiitiko chekuti matambudziko akajairika mumasikirini ehunhu uhwu haazovapo muiyo iPhone X, isu tinofungidzira kuti vachange vaisa kuyedza kwese mu software uye mifananidzo inofamba zvishoma (senge bhatani reKumba pane iyo Galaxy S8) kuti udzivise. Nekudaro, usakanganwa kuti ichi hachisi chiyero chekuyedza chekuita, ichiri dambudziko rinoramba riripo pane izvi zvidzitiro uye zvinoenderana zvakanyanya nekushandiswa kweumwe neumwe zvaive zvakasununguka. Saka chinhu chakajairika ndechekuti kana isu tichiona skrini yakapiswa muiyo iPhone X, asi kwete nenzira yakarongeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Ko iyo iPhone X ichave nechidzitiro chakatsva seGoogle Pixel 2?
Dzidza kuronga paIOS neaya akasarudzika ekupa makosi
Isu takaedza iyo Dodocool isina mota mota charger